Bakhaaro - Delta Injineer Belgium
Fogaanta la hagaajin karo 600–1200mm, dhererka ugu badan 1200.
Universal, mashiin buuxa oo si otomaatig ah loogu xiray dhalada bacda si toos ah.
Ballaadheedu waa la bedeli karaa 800-1200mm, dhererka la isku hagaajin karo 200-1200mm, dhererka badeecada 50-500mm.
Tuesday, April 19 2016 by Injineer Delta
Boorsada xawaaraha sare, hufnaanta sare
Delta Injineerku waxay soo bandhigaysaa inay tahay boorso xawaare sare leh oo cusub, DB222. Waa shey xawaare sare oo xawaare sarbeysan leh, kaas oo ku gaari kara xawaare dhan 25.000 BPH baggi kasta (waxay kuxirantahay qaabka dhalada).
Nidaam kontorool gaar ah wuxuu hubiyaa Helitaan Sare, xawaare sare iyo dib u dhac. Waxaan diiradda saareynaa qaabeynta khadadka aadka u hufan, waqtiga ugu yar ee la joogo, beddelka degdegga ah ee keena faa'iidada sare